flansy.exe ပြဿနာ — MYSTERY ZILLION
Windows တက်လာတိုင်း command box ကြီးတက်တက်လာနေတယ်။ နောက်ပြီး USB security မှာ flansy.exe ခဏခဏပေါ်ပေါ်လာနေတယ်။ Kasper နဲ့လည်း သတ်လို့လည်းမရဘူး။ ဘာနဲ့သတ်ရမလဲ ။ သိရင်ပြောပြကြပါဂျ ..
ကြယ်စင်က wrote: »
အဲဒါ ဘာနဲ့သတ်ရင ်ရမလဲ ဆိုတော့.. Autorun Killer Conbofix ဆိုတဲ့ ဆော့၀ဲလေး နဲ့ သတ်လိုက်ရင် အိုကေသွားပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီဆော့၀ဲလေး ကို တော့ ကျွန်တော့ဆီမှာတော့ ရှိပါတယ်...ဒါပေမယ့် upload တင်ပေးဖို့က.. ကော်နက်၇ှင်က ဘယ်လိုမှ တင်မရလို့ပါ..ဒါကြောင့် အင်တာနက်ကနေပဲ ရှာကြည့်လိုက်ပါ.. ပြီးတော့ အဲဒါလေး run တဲ့အချိန်မှာ ကွန်ပျူတာ မှာ run နေတာ မှန်သမျှ အကုန် exit အရင် လုပ်ထားပါ.. အဲဒီဆော့၀ဲလ်နဲ့ သတ်ပြီး၇င် စောစောက command box လေး run နေတဲ့ ဖိုင်လေးကို. system32 ထဲမှာ သွားရှာပြီး Delete လုပ်ပြစ်လိုက်ပါ..အဲဒါဆို အိုကေသွားပါပြီ.. နောက်ပြီးကျန်ပါသေးတယ် . တို့ E: တို့ ထဲမှာ ရှိတဲ့ Folder.exe တွေကို အကုန် ဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါ.. အားလုံ းအဆင်ပြေသွားပါလိိမ့်မယ်.. ကျွန်တော်တော့ အဲဒါမျိုးကို. သုံးခါ ရှိပြီ ကြုံဖူးထားလို့ပါ.....